ဇော်သစ် – အံ့ထူးမော်ကို ရှာပေးပါ (၀တ္ထုတို) | MoeMaKa Burmese News & Media
(မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၅
အမှန်တရားဆိုတာ လူတိုင်း လိုချင်တဲ့အရာ…။ လူတိုင်း ပြောတတ်တဲ့အရာ…။ ဒါပေမယ့်… အမှန်တရားကို လူတိုင်း ရနိုင်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် လူတွေနေ့စဉ်ပြောနေကြတဲ့ စကားလုံးတွေထဲမှာ အမှန်တရားအစစ် ဘယ်လောက်များများ ပါဝင်နိုင်ပါသလဲ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွန်တော် စမ်းစစ်ကြည့်ချင်တယ်။ ကျွန်တော် အမှန်တရားအစစ်ကို ရှာဖွေကြည့်ချင်တယ်။
ဒီနေရာမှာ ဘာလို့ အမှန်တရားအစစ်လို့ ပြောရသလဲဆိုတော့ တစ်ခါတစ်ရံ အမှန်တရားဟန်ဆောင်တတ်တဲ့ အမှားတွေဟာ အမှန်တရားလို့ ထင်ရအောင်ကို အင်အားကောင်းလွန်းနေတတ်လို့ပါ။ အဲဒီလို အမှန်တရားအတုတွေဟာ တောင်ကျရေ များစီးသလို စီးဆင်းလာတဲ့အခါ၊ အားမကောင်းတဲ့ ကျူပင်၊ မြက်ပင်လို အမှန်တရားတွေဟာ ပြတ်သတ် မြောပါကြရတတ် တယ်။ အောက်ခြေ မြေသားမခိုင်တဲ့ ကမ်းပါးယံလို အမှန်တရားတွေဟာလည်း ပြိုကျပျက်စီးကြရတတ်တယ်။ တောင်ကျ ချောင်းရေလို အဟုန်ပြင်းစွာ စီးဆင်းလာတတ်တဲ့ လူညီအမှား၊ သို့မဟုတ် အမှန်တရားအတုတွေကို ကျွန်တော်ကတော့ “ရေစီးကမ်းပြိုအမှန်တရား” လို့ အမည်ပေးချင်တယ်…။
ဒီစာဖတ်နေတဲ့ ခင်ဗျားဟာ အမှန်တရားကို အသက်နဲ့ထပ်တူ မြတ်နိုးသူတစ်ယောက်ဆိုရင်တောင်…
တက်ညီလက်ညီ အင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ ဝါးခေါင်းတိုး စီးဆင်းလာတတ်တဲ့ အမှန်တရားအတုတွေကို ရုတ်တရက် ရင်ဆိုင်ရပြီဆိုရင် ခင်ဗျား… ဘယ်လောက်များ တောင့်ခံနိုင်မလဲ။ လူညီရင် ဤကို ကျွဲဖတ်တတ်တဲ့ ဒွန္တယာကြီးမှာ ကိုယ့်ဘဝ ကို အများရဲ့အပစ်ပယ်ခံ အထီးကျန်သမား မဖြစ်ဖို့အရေး…၊ အများနဲ့အတူ ရောယိမ်းလိုက်၊ ဘသားယိမ်းလိုက်နဲ့ အမှားဆိုတဲ့ မိုးခါးရေကို ခင်ဗျား… (သိသိကြီးနဲ့) ဘယ်နှစ်ကြိမ် သောက်ခဲ့ ပြီးပြီလဲ…။ ကျွန်တော် သိချင်မိပါတယ်…။
ဘာလို့ဆို… ကျွန်တော်က လူတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ရှာဖွေနေခဲ့ရလို့ပါပဲ…။
အဲဒီလို ဝါးလုံးထိုးစီးလာတဲ့ တောင်ကျချောင်းရေလို အမှန်တရားအတုတွေကို ချောင်းအလယ်မှာရှိတဲ့ ကျောက်ဆောင်ကြီး တစ်ခုလို အမှန်တရားအစစ်အတွက် မတုန်မလှုပ်၊ မယိုင်မလဲ၊ ကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်နိုင်တဲ့ ရဲရဲတောက် လူသားတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ဖူးတယ်။
လူသားဆိုလို့ အရွယ်ရောက်ပြီး လူကြီးတစ်ယောက်လို့တော့ မထင်လိုက်လေနဲ့။ ကျွန်တော် သူ့ကိုတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်က အမှန်တရားဘက်တော် သား သကောင့်သားဟာ မူလတန်းတက်နေတဲ့ ဆယ်နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်လေး တစ်ယောက်ပါ။
ပခုက္ကူမြို့၊ အ.မ.က.(၅)။ ဖောင်တော်ဦးကျောင်းလို့လည်း ခေါ်တယ်။ ဘာလို့ဆို ပခုက္ကူမြို့ရဲ့ အထင်ကရ ဘုရားတစ်ဆူဖြစ်တဲ့ ဖောင်တော်ဦးဘုရားပွဲ လှည်တဲ့အခါ အဲဒီကျောင်းက ရဲလှေတစ်စီး အမြဲတမ်းပါတယ်။ ကျောင်းသားလေးနှစ်ယောက်က ရဲလှေရဲ့ထိပ်မှာ မင်းသားဝတ်စုံနဲ့က။ ကျန်တဲ့ကျောင်းသား နှစ်ဆယ်လောက်က လူပျိုတော်သားဝတ်စုံနဲ့ လှေဘောင်တစ် ဖက်တစ်ချက်မှာ လှော်တဲ့ဟန်လုပ်။ နောက်ကျောင်းသားနှစ်ယောက်က အမတ်ဝတ်စုံနဲ့ လှေပဲ့ပိုင်းမှာ တက်မကိုင်ရင်း ရပ်ကြည့်နေတဲ့ မြို့သူ/မြို့သားတွေကို ပြောင်ပြနဲ့။ ဖောင်တော်ဦးကျောင်းကရဲလှေယိမ်းဟာ သိပ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်။
ရဲလှေလို့ခေါ်တဲ့ လှေကြီးကလည်း အဲဒီခေတ်က ချက်ပလက်တစ်စီးစာ မကဘူး။ လှေဦးနဲ့ လှေပဲ့တွေဟာ ချက်ပလက် ကားကြီးရဲ့ ရှေ့နဲ့နောက်မှာ နှစ်ပေလောက်စီ ထွက်နေတယ်မှတ်တာပဲ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း လေးတန်းကျောင်း သားဘဝ အမှတ်ငါးကျောင်းရဲ့ မူလတန်းနောက်ဆုံးနှစ်မှာ အဲဒီ ရဲလှေကြီးနဲ့ မင်းသားကခဲ့ဘူးတယ်။ ဖောင်တော်ဦးကျောင်းလို့ အမည်တွင်ရတာဟာ အဲဒီရဲလှေကြီးရဲ့ အောင်မြင်မှုကြောင့်ပါ။
အဲဒီရဲလှေကြီးကလည်း အစဉ်အလာကြီးသလားမမေးနဲ့။ ကျန်တဲ့ သူငယ်တန်း၊ ပထမတန်း၊ ဒုတိယတန်းနဲ့ တတိယတန်းက ကလေးတွေဟာ ရဲလှေပေါ်မှာ ပါဝင်ခွင့်မရဘူး။ ဖောင်တော်ဦးကျောင်းရဲ့ ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီး ဦးစောကိုယ်တိုင်သင်တဲ့၊ မူလတန်းနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသား လေးတန်းတက်နေတဲ့ ကလေးတွေသာ ပါဝင်ရတယ်။
အံ့ထူးမော်ရဲ့ ကလေးအရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် သူ့အမှန်တရားကို ရဲရဲတောက် ကာကွယ်ခဲ့ပုံကလည်း အမှတ်ငါးကျောင်းရဲ့ လေးတန်းကျောင်းသားဘဝမှာ ကြုံခဲ့ရတာလေ။ ကျွန်တော် ဒီအဖြစ်အပျက်ကို အခုချိန်ထိမမေ့ဘူး။
ကလေးအရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် သူ့အမှန်တရားကိုသူ တန်ဖိုးထားတတ်လွန်းတဲ့ အံထူးမော်ရယ်။ အမှားတစ်ခုကို အမှန် တရားလို့ တညီတညာတည်း ဟစ်ကြွေးပြီး အံ့ထူးမော်ကို လှောင်ပြောင်ဝိုင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့ ဖောင်တော်ဦးကျောင်းက လေးတန်း ကျောင်းသားတွေရယ်။ စည်းကမ်းကုလားနား တင်းကြပ်လွန်းပြီး တစ်ခါရိုက်ရင် အနည်းဆုံး ကြိမ်လုံးသုံး ချောင်း လောက် ကုန်အောင်ဗျင်းတတ်တဲ့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦးစောရယ်။ နောက်ပြီး အံ့ထူးမော်နဲ့အတူ အမှန်တရားကို သိပါ ရက်နဲ့ အများအင်အားနဲ့ ဆရာစောရဲ့ ကြိမ်လုံးဒဏ်ကို ကြောက်ပြီး အမှားဖက်ကို ဘက်ပြောင်းပစ်လိုက်တဲ့ ကျွန်တော်ရယ်…။ ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေပါဗျာ…။
“ဟေ့ကောင်တွေ မနေ့က ဆရာကြီးပေးလိုက်တဲ့ အိမ်စာ မင်းတို့ အဖြေဘယ်လောက်ရကြလဲ”
“အေး… ငါလည်း ၂း၁၄”
“ငါလည်း ၂း၁၄ ပဲ”
ကျောင်းသားတစ်ယောက်က အခန်းထဲကို လှမ်းဝင်လာရင်း မေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ စတုတ္ထတန်း ကျောင်းသား/ကျောင်း သူအားလုံးဟာ တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ဖြေလိုက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အဖြေအားလုံးကတော့ အတူတူပါပဲ။
မနေ့က ဆရာကြီးဦးစောက ကျွန်တော်တို့ကို သင်္ချာအိမ်စာတစ်ပုဒ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အချိန်ကိုတွက်ရတဲ့ပုစ္ဆာပါ။ မနက်ပိုင်း ဆိုရင် ဆယ့်နှစ်နာရီကို စံထားပြီးတွက်ရပါတယ်။ နေ့လည်ဆယ့်နှစ်နာရီကနေ ညဆယ့်နှစ်နာရီထိဆိုရင်တော့ နှစ်ဆယ့်လေး နာရီကို စံထားရပါမယ်။ ဒီအချိန်ပုဒ်စာတွေကို မနေ့က ဆရာကြီးက သူကိုယ်တိုင် အကြိမ်ကြိမ်တွက်ပြပြီးပါပြီ။ ကျောင်းဆင်း တော့ အိမ်စာတစ်ပုဒ် ပေးလိုက်တာပါ။ အိမ်စာပေးရင်းနဲ့ ဆရာကြီးက ကျွန်တော်တို့ကို မှာလိုက်ပါသေးတယ်။
“ကျောင်းမှာ ငါကိုယ်တိုင် မင်းတို့ကို အကြိမ်ကြိမ် တွက်ပြပြီးသား။ ဒီတော့ အခုပေးလိုက်တဲ့ အိမ်စာကို မင်းတို့အားလုံး အိမ်ကနေ မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်အောင် သေချာတွက်ခဲ့ကြ။ မနက်ဖြန်ကျောင်းရောက်လို့မှ အိမ်စာမပြီးဘူးဆိုရင် မပြီးတဲ့ ကျောင်းသားကို ကြိမ်လုံးနဲ့ ငါးချက်ရိုက်မယ်။ အဖြေ မှားတွက်လာရင်လည်း အရိုက်ခံရမယ်။ ငါကိုယ်တိုင် သေချာနား လည်အောင် သင်ပေးပါရက်နဲ့ မှားလာတယ်ဆိုရင်၊ အဲဒီကျောင်းသားဟာ ငါသင်နေတုန်းက သေချာနားမထောင်လို့ပဲ။ ဒါ့ကြောင့် အဖြေမှားရင် သုံးချက်အရိုက်ခံ ရမယ်။ ဒါပဲ…”
ကျွန်တော်တို့ စတုတ္ထတန်းကျောင်းသား/ကျောင်းသူ အကုန်လုံးဟာ ဆရာကြီးဦးစောဆိုရင် တုန်နေအောင် ကြောက်ရပါ တယ်။ ဆရာကြီးက ဖောင်တော်ဦးကျောင်းရဲ့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဖြစ်သလို၊ စည်းကမ်းလည်းကြီး၊ အရိုက်လည်း ကြမ်းပါ တယ်။
ဖောင်တော်ဦးကျောင်းမှာ သူငယ်တန်း၊ ပထမတန်း၊ ဒုတိယတန်း၊ တတိယတန်းနဲ့ စတုတ္ထတန်းဆိုပြီး အတန်းငါးတန်းရှိပါတယ်။ အတန်းအားလုံးဟာ ကျောင်းသားဦးရေ ငါးဆယ်ခြောက်ဆယ်လောက်သာရှိပြီး တစ်တန်းကို တစ်ခန်း၊ ဆရာ/ဆရာမ တစ်ယောက်ပဲ သင်ပါတယ်။ သူငယ်တန်းကနေ တတိယတန်းအထိ ကျောင်းသားတွေ အတန်းတက်ရင် ဆရာ/ဆရာမတွေပါ လိုက်ပြီးအတန်းတက်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်တို့ကို သူငယ်တန်းမှာ သင်တဲ့ဆရာ/ဆရာမဟာ တတိယတန်းအထိ ဒီဆရာ/ဆရာမပါပဲ။ လုံးဝ မပြောင်းပါဘူး။
အဲ… ကျောင်းသားတွေ တတိယတန်းအောင်လို့ စတုတ္ထတန်းတက်ရင်တော့ တတိယတန်းက ဆရာ/ဆရာမဟာ သူငယ်တန်းပြန်ဆင်းပြီး ဖောင်တော်ဦးကျောင်းကို အသစ်ရောက်လာတဲ့ ကလေးတွေကို သင်ရပါတယ်။ ဒိလိုနဲ့ ဆရာ/ဆရာမတွေဟာ သူငယ်တန်းကနေ တတိယတန်းအထိ သင်လိုက်၊ တတိယတန်းပြီးရင် သူငယ်တန်းပြန်ဆင်း သင်လိုက်နဲ့ လည်ပတ်နေပါတယ်။
ဖောင်တော်ဦးကျောင်းရဲ့ အတန်းကြီးဖြစ်တဲ့ စတုတ္ထတန်းကိုတော့ ဘယ်ဆရာ/ဆရာမမှ မသင်ရပါဘူး။ ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီးကပဲ သူကိုယ်တိုင် အတန်းပိုင်လုပ်ပြီး စာသင်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က အစိုးရရဲ့ ပညာရေးစနစ်အရ စတုတ္ထတန်း ကလည်း အစိုးရစစ်ဆိုတော့ အတော်အရေးပါပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲဒီအချိန်က ဖောင်တော်ဦးကျောင်းဟာ စတုတ္ထတန်း အောင်ချက်မှာ တန်းလုံးကျွတ်အောင်မြင်တာ ငါးကြိမ်မက ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ဆရာကြီးဦးစော စရောက်ကတည်းက ဆိုပါ တော့။
ဆရာကြီးဦးစောရဲ့ပုံစံက အသားညိုညို၊ ခပ်ဝဝ။ မျက်နှာက ခပ်ဝိုင်းဝိုင်း။ ဆံပင်ကို အမြဲတန်း ကတုံးဆံတောက်ကေပဲ ထားတယ်။ ကွမ်းတပြစ်ပြစ် ဝါးသေးတယ်။ ကွမ်းဝါးလွန်းလို့ ထင်ပါရဲ့။ အင်္ဂလိပ်စာကို ပီပီသသ အသံမထွက်နိုင်ဘူး။ ဒီတော့ ဆရာကြီးက မြန်မာစာ၊ သင်္ချာနဲ့ တစ်ခြားဘာသာတွေကို သင်ပြီး၊ အင်္ဂလိပ်စာကို ဆရာမတစ်ယောက်က သင်ပေးတယ်။
ဆရာကြီးဦးစောရဲ့ စည်းကမ်းကောင်းမှု၊ အရိုက်ကြမ်းမှု၊ ကျောင်းသားအောင်ချက်ကောင်းမှုတွေဟာ ဖောင်တော်ဦးကျောင်းရဲ့ ဂုဏ်သတင်းကို ပိုပြီးတော့ မွှေးပျံ့စေခဲ့တယ်။
တစ်ခါတစ်ခါ ဆရာကြီးဦးစောဟာ သူ့ရှေ့က စားပွဲမှာ ကြိမ်လုံးငါးလုံးလောက်ကို တင်ပြီး ဘာစကားမှမပြောပဲ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူတွေကို စီးကြည့်ပြီး ကွမ်းတမြုံ့မြုံ့ဝါးနေတတ်တယ်။ အဲလိုအချိန်မျိုးဆို ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ဆရာကြီးကို မျက်လုံးချင်းဆိုင် မကြည့်ဝံတာနဲ့ကို လွယ်အိပ်ထဲက စာအုပ်တွေကို ထုတ်ပြီး စာကြက်ချင်ယောင် ဆောင်ကြ ရတယ်။
အဲလောက်ကြောက်ရတဲ့ ဆရာကြီးက ကျွန်တော်တို့ကို အိမ်စာပေးလိုက်တယ်။ တစ်တန်းလုံး ဘယ်သူမှ မလုပ်ပဲ မနေရဲဘူး။ အိမ်မှာ ပုစ္ဆာကို နားမလည်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အဆော့မက်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေ လည်းရှိပါတယ်။ သူတို့က ကျောင်းကို စောစောလာပြီး အိမ်စာလုပ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေဆီက တစ်ဆင့်ပြန်ကူးကြတာပေါ့။
ဆရာကြီးဦးစောက အိမ်စာပေးရုံတင်မက အဖြေလည်းမှန်ရမယ်လို့လည်း မှာလိုက်သေးတယ်။ ဒီတော့ အဖြေကို ကျောင်းမ တက်ခင်မှာ အချင်းချင်းတိုက်ကြည့်ကြရပြန်တယ်။ အားလုံးရဲ့ အဖြေတွေဟာ ၂း၁၄။ အကုန်လုံးက အဖြေဖြေအတူတူပဲ။ ကျွန်တော် တန်းသိလိုက်တယ်။ ဒါဟာ သူတို့အားလုံး မနက်ပိုင်း စံအချိန် ဆယ့်နှစ်နာရီနဲ့ တွက်ထားတာ။ အမှန်က ဒီပုစ္ဆာဟာ နေ့လည်ပိုင်းစံအချိန် နှစ်ဆယ့်လေးနာရီနဲ့ တွက်ရမှာ။
ပုစ္ဆာထဲမှာ နေ့လည်ဆိုတာကို အလွယ်တကူမသိအောင် လှည့်စားပြီး မေးထားတယ်။ ကျောင်းသားရဲ့ ဉာဏ်ရည်ကို စမ်းတဲ့ သဘောနေမှာပေါ့။ ကျွန်တော်က သူတို့နဲ့ မတူဘူး။ နှစ်ဆယ့်လေးနာရီနဲ့ တွက်ထားတော့ အဖြေက တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှိသမျှကျောင်းသားအားလုံးက အဖြေအတူတူဖြစ်နေတော့ ‘ငါများ မှားသလား’ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ လွယ်အိပ်ထဲက ပုံနှိပ်စာအုပ်ကို ထုတ်ပြီး ပုစ္ဆာကို ပြန်ဖတ်ကြည့်မိတယ်။ ‘ဟုတ်ပါတယ်… မှန်ပါတယ်… နှစ်ဆယ့်လေးနာရီနဲ့ တွက်ရမှာပါ’။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်အားပေးနေမိတယ်။
ဒီလောက်နဲ့လည်း ကျွန်တော့်စိတ်က စိုးရိမ်စိတ်မပြယ်သေးဘူး။ အကုန်လုံး အဖြေတိုက်ရင်း ဆူညံနေတဲ့ ကျောင်းခန်းတစ် ခုလုံးကို ပတ်ကြည့်မိတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ မျက်လုံးတွေက အတန်းရဲ့ နောက်ဆုံး စာသင်ခုံမှာ ဖတ်စာအုပ်တစ်အုပ်ကို အေး အေးလူလူထုတ်ဖတ်နေတဲ့ အံ့ထူးမော်ကို သွားတွေ့တယ်။
အံ့ထူးမော်ရဲ့ပုံက တော်တော်ထူးခြားတယ်။ ဒီလောက်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူတွေ စာအုပ်တွေကိုယ်စီဖွင့်ပြီး အဖြေတိုက် နေကြတာတောင် သူကတော့ သူနဲ့ မဆိုင်သလို လုံးဝ အေးအေးဆေးဆေးပဲ။ သူ့ဘေးနားမှာ ပွက်ပွက်ညံအောင် အဖြေ တိုက်ကြ၊ ရယ်ကြ၊ မောကြ လုပ်နေကြတဲ့ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူတွေရဲ့အသံကို သူက မကြားသလိုပဲ။ ပုံနှိပ်စာ အုပ် တစ်အုပ်ကိုသာ သဲကြီးမဲကြီး ဖတ်နေတယ်။
အံ့ထူးမော်က အတန်းရဲ့ နောက်ဆုံးတန်းမှာသာ အမြဲထိုင်ပြီး ကျွန်တော်က အတန်းရဲ့ ရှေ့ဆုံးခုံမှာ ထိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဖောင်တော်ဦးကျောင်းမှာ ကျောင်းသားငါးယောက်လောက် ရင်ဘောင်တန်းထိုင်လို့ရတဲ့ ခုံတန်းရှည်တွေကိုသာ သုံးပါတယ်။ ဒါဟာ စာရေးဖို့ စားပွဲခုံပါပဲ။ ထိုင်စရာခုံ လုံးဝမရှိပါဘူး။ ဖျာကြမ်းတွေ ခင်းပေးထားပြီး ဖျာကြမ်းပေါ်မှာ စာရေးဖို့ ခုံတန်းရှည်တွေကို စီခင်းထားတယ်။
ခုံတန်းရှည်တွေကို တစ်ဖက်ငါးခုံ ဒါမှမဟုတ် ခြောက်ခုံလောက် နှစ်တန်း တန်းစီခင်းထားတယ်။ အဲတော့ ခုံတန်းရှည်အ တန်းဟာ နှစ်ခြမ်းဖြစ်သွားတယ်။ ဘယ်ဘက်ခြမ်းက မိန်ကလေးတွေ ထိုင်ပြီး၊ ညာဘက်ခြမ်းက ကျွန်တော်တို့ ယောက်ျား လေးတွေ။ အားလုံးဟာ ထိုင်ခုံမပါတော့ ဖျာပေါ်မှာပဲ ပျဉ်ပြင်ခွေထိုင်ပြီး စာသင်ကြရတယ်။
ကျွန်တော်လည်း အံ့ထူးမော်ထိုင်နေတဲ့ နောက်ဆုံးတန်းကို သွားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ နောက်ဆုံးတန်းရဲ့ စာရေးခုံတန်းရှေ့ အံ့ထူးမော်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ သူက ကျွန်တော် ရောက်လာတာတောင် ကျွန်တော့်ကို မော့မကြည့်ပဲ၊ သူ့ရှေ့ခုံတန်းပေါ်က ပုံနှိပ်စာအုပ်ကိုသာဖတ်နေပါတယ်။
အံ့ထူးမော်က ဖတ်လက်စ စာအုပ်ကနေ အကြည့်ကိုခွာ၊ ခေါင်းကိုမော့ပြီး ကျွန်တော့်ကို ဘာလဲဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ မေးဆတ်ပြတယ်။ သူ့မျက်နှာက တစ်လောကလုံးကို ထီမထင်သလို။ ဒါဟာ အံ့ထူးမော်ရဲ့ စတိုင်ပါပဲ။
ဖအေက ဆိုက္ကားသမား။ မအေက ပဲပြုတ်သယ်။ ချို့တဲ့လွန်းတဲ့သူ့ဘဝကို အထင်သေးပြီး တစ်ခြားကျောင်းသားတွေ မနှိမ်ဝံ့ အောင် မျက်နှာမှာ မာန်မာနကို အမြဲမောင်းတင်ထားသလားမှတ်ရပါတယ်။ အသားလတ်လတ်။ ဆံပင်က ဘိုကေတို။ မျက် လုံးတွေက ခပ်မှေးမှေး။ ကျောင်းသားချင်းကြည့်တဲ့အခါ မျက်လုံးတွေကို တမင်မှေးထားသလို ထင်ရအောင် အကြည့်မျိုးနဲ့ ကြည့်တတ်တယ်။
အခုလည်း ကျွန်တော့်ခေါ်သံအဆုံးမှာ သူ့မျက်လုံးမှေးမှေးတွေနဲ့ မော့ကြည့်ပြီး တစ်ဆက်တည်း မေးကို ဆတ်ပြလိုက်တယ်။ သူ့နုတ်ခမ်းကလည်း ထီမထင်သလို အတွန့်အကွေးလေးက ပေါ်လို့။ ဒါ အံ့ထူးမော်ရဲ့ စတိုင်ပဲလေ။
သူ့စတိုင်ကို အလွတ်ရနေတဲ့ ကျွန်တော်တောင် ရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတော့ လာရင်းကိစ္စကို မေ့ပြီး ဘာပြောရမှန်းမသိပဲ၊ ပြန်စဉ်းစားနေရတယ်။ သူ့အနားရောက်လာ။ သူ့နာမည်ကို ခေါ်ပြီးမှ ဘာမှမပြောပဲ ကြောင်တောင်တောင် လုပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို အံ့ထူးမော်က စိတ်မရှည်သလို မေးလိုက်တယ်။
“ဟ ဘာလဲကွ တင့်လွင်စိုးရ…”
“ဟို… အဲ… ဒီလိုကွာ… မနေ့က ဆရာကြီးပေးလိုက်တဲ့ အိမ်စာ အဲ… အဲ… အဲဒါ… မင်းတွက်ခဲ့လားလို့…”
ကျွန်တော်ဟာ သူ့အမေးကို အထစ်ထစ်အငေါ့ငေါ့နဲ့ ပြန်ဖြေလိုက်မိတယ်။ အံ့ထူးမော်က သူ့ရဲ့ မဲနက်နေတဲ့ မျက်ခုံးနှစ်ခုကို အတွန့်ကွေးလေးပေါ်အောင် မျက်မှောင်တစ်ချက်ကျုံ့လိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ကို ပြန်မေးတယ်။
“ဟေ့ကောင်… မင်းက မတွက်ခဲ့ရသေးဘူးလား။ ဘာလဲ မတွက်တတ်လို့ ငါ့ဆီက ကူးချမလို့လား။ ဒီမှာ သူငယ်ချင်း ဒါမျိုး တော့ ငါလုံးဝ အားမပေးဘူး။ မင်းမတွက်တတ်ရင် တွက်နည်းပြောပြမယ်။ ငါ့ထဲကတော့ အကူးမခံဘူးကွ…”ဆိုပြီး အံထူးမော် က ကျွန်တော် ပြန်ပြောချိန်မရအောင် ရေပက်မဝင် ပြောချလိုက်ပါတယ်။ အံ့ထူးမော်က အဲသလို အကောင်။
“မဟုတ်ပါဘူး အံ့ထူးမော်ရာ။ ငါ တွက်လည်း တွက်တတ်တယ်။ တွက်လည်း တွက်ခဲ့ပါတယ်။ မင့်ဆီ အခု ငါလာတာက အဖြေတိုက်ချင်လို့ပါ။”
“ဟ… ဘာအဖြေတိုက်စရာလိုလည်းကွ။ တွက်နည်းမှန်ရင် အဖြေမှန်မယ်။ တွက်နည်းမှားရင် အဖြေမှားမယ်။ ဘာမှ တိုက်စ ရာမလိုဘူး။”
“ဒါတော့ ဒါပေါ့ကွာ။ ဒါပေမယ့် တစ်တန်းလုံးက ဆယ့်နှစ်နာရီနဲ့ တွက်ထားပြီး ငါက နှစ်ဆယ့်လေးနာရီနဲ့ တွက်ထားတော့ သူတို့နဲ့ ငါနဲ့ အဖြေက မတူဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါ မင့်အဖြေနဲ့ များတူမလားလို့ ငါက တိုက်ကြည့်ချင်လို့ပါ။”
ကျွန်တော့်စကားကို ကြားတယ်ဆိုရင်ပဲ အံ့ထူးမော်ဟာ ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ မလိုက်ဖက်တဲ့ သူ့စတိုင်အတိုင်း နှုတ်ခမ်း ထောင့်စွန်းလေးကို အနဲငယ်ကွေးပြီး မခိုးမခန့် ပြုံးလိုက်ပါသေးတယ်။ ပြုံးလို့ အားရလောက်ပြီဆိုမှ ကျွန်တော့်မျက်နှာကို စေ့စေ့ကြည့်ပြီး အောက်ပါစကားတွေကို တစ်လုံးချင်း ပြောချလိုက် တယ်။
“တင့်လွင်စိုးရယ် ငါပြောပြီးပြီပဲ။ မင့်တွက်နည်းမှန်ရင် အဖြေမှန်မယ်။ တွက်နည်းမှားရင် အဖြေမှားမယ်။ ငါနဲ့ အဖြေတိုက် တော့ရော ငါက ဟိုကောင်တွေလို ဆယ့်နှစ်နာရီနဲ့တွက်ထားရင် မင်း ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ မင့်အဖြေကို ငါနဲ့တူအောင် လိုက်ပြင်မှာလား။ အေး အဲလို ပြင်မယ်ဆိုရင် ငါပြမယ်။ မဟုတ်ရင် မပြဘူး။ အိုကွာ… ရှုပ်ပါတယ်။ မှားမှားမှန်မှန် ကိုယ် ကိုယ်တိုင် တွက်ထားတာက ကိုယ့်အဖြေပါပဲ။ ပြလည်း မပြဘူး။ ပြင်လည်း မပြင်နဲ့။ သွားတော့… သွားတော့…။ ငါ… စာကျက်နေတာ လာမနောက်ယှက်နဲ့…”
ကျွန်တော်ဟာ အံ့ထူးမော် ဘယ်လိုတွက်ထားတယ်။ သူ့အဖြေက ဘယ်လောက်ဆိုတာ မသိခဲ့ရပဲ၊ သူ့အနားက ခွာခဲ့ရပါ တယ်။ ကျွန်တော့် နေရာ ကျွန်တော် ပြန်ရောက်တော့ ကျွန်တော်နဲ့ အဖြေတူတဲ့ လူများရှိနေမလားဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ကျွန်တော်ဟာ နောက်မှ ရောက်လာတဲ့ တစ်ခြားကျောင်းသားတွေနဲ့ အဖြေတိုက်ကြည့်ပါသေးတယ်။ အားလုံးဟာ အတူတူပါပဲ။ တစ်ယောက်မကျန် ၂း၁၄ပါ…။ ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်းသာ…။
ကျွန်တော်ဟာ စဉ်းစားရင်းနဲ့ ကြောက်လာတယ်။ ကျောင်းကမတက်သေးတော့ ဆရာကြီးဦးစောလည်း ရောက်မလာသေး ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆရာကြီးဦးစောရဲ့ လက်နက်ကိရိယာတွေဖြစ်တဲ့ မြေဖြူဗူးရယ်၊ သင်ပုန်းဖျက်ရယ်၊ ကြိမ်လုံးငါးချောင်းရယ် ကတော့ ဆရာကြီးရဲ့ စားပွဲပေါ်မှာ အဆင်သင့် နေရာယူထားပြီးပါပြီ။ ဆရာကြီးမလာခင်မှာ အတန်းခေါင်းဆောင် ကျောင်း သားက ဗီရိုထဲက ဆရာကြီးရဲ့ လက်နက်ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်ထားပေးတာပါ။
အရင်နေ့တွေက အဲဒီပစ္စည်းတွေကို မြင်ရင် ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ဘယ်လိုမှ မခံစားရပါဘူး။ အခုတော့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ အဲဒီပစ္စည်းတွေဟာ ဂျပန်ကင်ပေတိုင်ရုံးက ပလာယာတွေ၊ ရေနွေးခရားတွေ၊ ကြာပွတ်ကြီးတွေကို ကြည့်နေရသလိုပါပဲ။ ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော်လည်း ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး ဇာတ်ကားထဲက ဘုမသိ၊ ဘမသိ အနှိပ်စက်ခံရမယ့် တော်လှန်ရေး သမားတစ်ယောက်လို မြင်လာပါတယ်။ တကယ်လည်း ကျွန်တော်ဟာ အများစုနဲ့ အဖြေမတူသော တော်လှန်သူတစ်ယောက်၊ ပုန်ကန်သူတစ်ယောက် ဖြစ်နေပြီလေ။ ဒီကြားထဲ အံ့ထူးမော်က ပြောလိုက်သေးတယ်။
“ငါက ဟိုကောင်တွေလို ဆယ့်နှစ်နာရီနဲ့တွက်ထားရင် မင်း ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ မင့်အဖြေကို ငါနဲ့တူအောင် လိုက်ပြင်မှာ လား”တဲ့…
သူ့စကား အသွားအလာကြည့်ရတာ သူလည်း ကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ အဖြေတူချင် တူနေနိုင်တယ်။ တကယ်လို့များ သူလည်း ကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေလို ဆယ့်နှစ်နာရီနဲ့ တွက်ထားရင်၊ နှစ်ဆယ့်လေးနာရီ စံအချိန်နဲ့ ပုစ္ဆာကိုတွက်ခဲ့တာ ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေမှာပေါ့။
ဒီကြားထဲ ကျွန်တော်နဲ့ တစ်ခုံတည်းထိုင်တဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ကျွန်တော့်ကို ဝိုင်းပြောကြတယ်။ ကျွန်တော့် အဖြေဟာမှားသတဲ့။ ကျွန်တော်နဲ့ တူတဲ့သူ တစ်တန်းလုံးမှာ ဘယ်သူမှ မရှိဘူးဆိုပဲ။ ယောက်ျားလေးတွေတင်မက ကောင်မလေးအုပ်စုထဲမှာလည်း ကျွန်တော်နဲ့ အဖြေတူတဲ့သူ မရှိဘူးဆိုပဲ။ အင်း… ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆယ်နှစ်သားဆိုတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံအရ တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စ အမှားမျိုးကိုသာ ကျွန်တော် တွေ့ဖူးခဲ့ပေမယ့်၊ အခုလို တညီတညွတ်တည်း တစ်တန်းလုံး မှားတာမျိုးကိုတော့ ကျွန်တော်လည်း မတွေ့ဖူးသေးဘူးလေ။
အကယ်၍ တစ်တန်းလုံးမှားတယ်ဆိုရင်တောင် ဆရာကြီးက ကျောင်းသားလေးငါးခြောက်ဆယ် ကိုတော့ တန်းစီမရိုက် လောက်ပါဘူး။ ရိုက်လည်းရိုက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ခမျာ လက်အံသေအောင်၊ လက်ညောင်းအောင် ရိုက်ရမှာ။ ဒီလောက် တော့ ဆရာကြီးအနေနဲ့ အပင်ပန်းခံနိုင်လိမ့်မယ် မထင်ဘူး။ တကယ်လို့ တစ်တန်းလုံးကမှန်ပြီး ငါတစ်ယောက်တည်း မှားနေရင်တော့ ငါ့ကို ဆရာကြီးက အသေရိုက်မှာ။ တွေးရင်း… တွေးရင်းနဲ့ ကျွန်တော် ကြောက်လာတယ်။
အမှန်ဆို အဲဒီနေ့က အဖြေတိုက်ချင်လို့ ကျောင်းကို စောစောလာခဲ့မိတာ။ ကလေးသဘာဝပေါ့ဗျာ။ ကျောင်းက ပေးလိုက် တဲ့အိမ်စာကို ကိုယ်က ပြီးအောင်တွက်လာခဲ့တယ်ဆိုရင် ကျောင်းကို စောစောရောက်ချင် တတ်ကြတယ်။ အဖြေတိုက် ချင်ကြတယ်။ မပြီးသေးတဲ့သူကိုတွေ့ရင် ကိုယ်ကပြီးအောင် တွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ယူမှုမျိုးနဲ့ ကြွားချင်တတ်ကြတယ်။ ကိုယ့်တွက်တာက သူများတွေနဲ့တူပြီး အဖြေမှန်ရရင်လည်း ပျော်ရွှင်တတ်ကြတယ်။
အခုတော့ ခက်ပြီ။ ကျွန်တော့်အဖြေဟာ ဘယ်သူနဲ့မှ မတူတဲ့အပြင်၊ ကိုယ်မှန်တယ်လို့ တစ်ထစ်ချ ထင်ထားခဲ့တဲ့ တွက် နည်းကိုတောင် မှန်လား၊ မှားလား မဆုံးဖြတ်နိုင်တော့အောင် ကျွန်တော့်စိတ်မှာ ကြောက်ရွံ့ စိတ်က လွှမ်းမိုးလာတယ်။ အများနဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်နေတော့ အားငယ်ဝမ်းနဲတဲ့စိတ်အခံကလည်း ပြင်းပြင်းထန် ထန် ရုန်းထလာတယ်။
ကျွန်တော်အိမ်ကတွက်လာခဲ့တဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်လုံးကို ဖျက်ပြီး၊ ဆယ်နှစ်နာရီစံအချိန်နဲ့ တစ်ပုဒ်လုံး ပြန်တွက်ပစ်လိုက်တယ်။ အဲဒီတော့မှ ကျွန်တော့်စိတ်တွေဟာ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးပြီး သူများနဲ့တန်းတူ ဖြစ်သွားသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။
ကဲ…. ကျောင်းကြီးရေ… တက်ပါတော့။ ဆရာကြီးလည်း လာပါတော့။ ကျွန်တော်လည်း အများနဲ့အတူ မှန်ရင်လည်း မှန်ကြ ရုံ။ မှားတော့လည်း တညီတညာတည်း မှားကြတာပေါ့။ ကျွန်တော် မကြောက်တော့ပါဘူး။ တစ်တန်းလုံးရဲ့ အဖြေက မှားနေ ရင်တောင် ဆရာကြီးဟာ သူ့အတန်းသားတွေ အကုန်လုံးကို တစ်ယောက်မကျန် ရိုက်ရလောက်အောင်တော့ မေတ္တာခေါင်း ပါးလိမ့်မယ် မဟုတ်ပေဘူး။
ကျွန်တော် တွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲ ကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်းသံနဲ့အတူ ဆရာကြီးဦးစောဟာ ကွမ်းတစ် မြုံ့မြုံ့ဝါးရင်း၊ အတန်းထဲကို လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ လှမ်းဝင်လာပါတော့တယ်…
“ကဲ မနေ့က ငါပေးလိုက်တဲ့ အိမ်စာ တွက်ခဲ့ကြသလားဟေ့…”
ဆရာကြီးဦးစောဟာ သူရဲ့ ဝဖိုင့်ဖိုင့် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို စားပွဲနောက်က ကုလားထိုင်မှာ ရော့တိရော့ရဲ မှီထိုင်ရင်း အတန်းသား တွေကို မေးလိုက်ပါတယ်။ ဆရာကြီးရဲ့ အမေးကို ကျွန်တော်တို့အားလုံး တညီတညာတည်း ဖြေလိုက်ပါတယ်။
အံ့ထူးမော်ကလွဲရင် တစ်တန်းလုံးက ဖြေလိုက်ပါတယ်။ အံ့ထူးမော် မဖြေတာကို ကျွန်တော်က ဘာ့ကြောင့် သိသလဲဆိုရင်၊ ဆရာကြီးရဲ့ ‘အဖြေဘယ်လောက်ရသလဲ’ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအဆုံးမှာ အံ့ထူးမော် ဘယ်လိုဖြေမလဲ သိချင်ဇောနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ သူ့ကို လှည့်ကြည့်မိလိုက်လို့ပါ။
အံ့ထူးမော်ဟာ ဆရာကြီးရဲ့အမေးကို တစ်ခြားကျောင်းသားတွေလို မဖြေပဲ၊ သူ့ရှေ့က လေ့ကျင့်ခန်း စာအုပ်ကိုသာ စိုက် ကြည့်နေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ စတိုင်အတိုင်း မဲနက်နက် မျက်ခုံးနှစ်ဖက်ကို အတွန့်ကွေး၊ မျက်မှောင်ကုတ်ပြီး စာအုပ်ကို သဲသဲမဲမဲ စိုက်ကြည့်နေတာပါ။ ကျွန်တော်တောင် သူ့ကို လှည့်ကြည့်ရင်းကနေ ‘၂း၁၄’ဆိုတဲ့ အဖြေကို နှုတ်ဖျားက အလိုလို ထွက် ကျသွားသေးတာ ဒီကောင်ဘာလို့ မဖြေသလဲ ကျွန်တော် စဉ်းစားလို့မရဘူး။ ကျွန်တော် တွေးနေတုန်းမှာပဲဆရာကြီးဆီက နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခု ကြားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကမန်းကတန်း အတန်းရှေ့က ဆရာကြီးဆီကို အာရုံပြု လိုက်ရတယ်။
“အဲဒီ အဖြေမရတဲ့သူ ရှိလား”
ဆရာကြီးက တစ်တန်းလုံးနီးပါး အော်ပြောလိုက်တဲ့အဖြေကို အဖြေမှန်လို့ ယူဆလိုက်ပုံရပါတယ်။ ဆရာကြီး ယူဆမယ် ဆိုလည်း ယူဆချင်စရာ။ ဆရာကြီးရဲ့ ထပ်ဆင့်မေးခွန်းကို ဘယ်သူမှ ပြန်မဖြေကြဘူး။ ကျန်တဲ့သူတွေကို ကျွန်တော် စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ တစ်တန်းလုံးမှာ ကျွန်တော် စိတ်အဝင်စားဆုံးကျောင်းသားဟာ အံ့ထူးမော်ပါ။ သူဘာပြောမလဲ ကျွန် တော် စိတ်ဝင်စားတယ်။ သူ့အဖြေဘာလဲ ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားတယ်။ ကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ အဖြေနဲ့ သူ့အဖြေ တူသလား၊ မတူဘူးလား။ ဒါကို ကျွန်တော် အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ သိချင်တယ်။
အတွေးနဲ့အတူ အံ့ထူးမော်ကို ဒုတိယအကြိမ် လှည့်ကြည့်မိတော့ သူဟာ သူ့စတိုင်အတိုင်း မျက်ခုံးကွေး၊ မျက်မှောင်ကုတ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ကိုသာ စိုက်ကြည့်နေတယ်။ ကြည့်နေတာမှ သူ့ယုံကြည်ချက် ဒါမှမဟုတ် သူ့အမှန်တရားဟာ ယုန်တစ်ကောင်လို စာအုပ်ထဲကနေ ခုန်ထွက်လာတော့မယ့် အတိုင်းပဲ။ ဆရာကြီးက နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မေးတယ်။
“အဲဒီအဖြေ မရတဲ့သူရှိလား။ ရှိရင် ရှေ့ထွက်ခဲ့။”
အမိန့်ပေးသလို ပြောလိုက်တဲ့ ဆရာကြီးရဲ့စကားအဆုံးမှာ အံ့ထူးမော်ဟာ သက်ပြင်းတစ်ခုကို မှုတ်ထုတ်ပြီး သူ့ရှေ့က လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ကို ပိတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ စာအုပ်ကိုကိုင်ပြီး ရဲရဲဝင့်ဝင့် မတ်တတ်ထရပ်လိုက်တယ်။ သူ့မျက်နှာ ကလည်း အဲဒီအချိန်က ကျွန်တော့်ကလေးဥာဏ်နဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖော်ရခက်တဲ့အရိပ်တွေ ပြေးလွှားလို့။ အခုချိန် ပြန်စဉ်း စားကြည့်တော့ အဲဒီတုန်းက အံ့ထူးမော် မျက်နှာပေါ်က အရိပ်တွေ၊ အရောင်အသွေးတွေဟာ ရဲရင့်ဝင့်စားတဲ့ ယုံကြည်ချက်။ သူလက်ခံထားတဲ့အမှန်တရားအတွက် အသက်ပင်သေသေဆိုတဲ့ စိတ်ခံစားချက်။ သူ့အမှန်တရားကို ထိပါးလာရင် ကျားရဲတစ်ကောင်အလား တုန့်ပြန်တိုက်ခိုက်တော့မယ့် သတ္တိများ ဖြစ်နေမလားလို့ ခုချိန်မှာ ကျွန်တော် တွေးနေမိတယ်။
“ဘာလဲအံထူးမော်… မင်းက… သူတို့ အားလုံးနဲ့ အဖြေမတူဘူးလား…”
ဆရာကြီးက နောက်ဆုံးတန်းမှာ တစ်ယောက်တည်း မတ်တတ်ရပ်၊ စာအုပ်ကို လက်တစ်ဖက်က ကိုင်ရင်း လက်ပိုက်ထားတဲ့ အံ့ထူးမော်ကို လှမ်းမေးလိုက်တယ်။ အံထူးမော်က ဆရာကြီးရဲ့အမေးကို “ဟုတ်ပါတယ် ဆရာကြီး”လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ ဆရာကြီးက…
အံ့ထူးမော်ရဲ့စကားအဆုံးမှာ ဆရာကြီးရဲ့ မျက်နှာပေါ်ကို အပြုံးတစ်ပွင့်ရောက်လာသလို၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရင်အစုံကလည်း ဒိန်းကနဲ ခုန်သွားတယ်။ မခုန်ခံနိုင်ရိုးလားဗျာ။ အံ့ထူးမော် ဆရာကြီးကို လှမ်းပြောလိုက်တဲ့ အဖြေဟာ နှစ်ဆယ့်လေးနာရီ စံအချိန်နဲ့ တွက်ထားတဲ့အဖြေ။ မှားတယ်ထင်ပြီး ကျွန်တော်ပြင်လိုက်မိတဲ့ တွက်နည်း။ အံ့ထူးမော်ရဲ့အဖြေဟာ ကျွန်တော့် အဖြေနဲ့ အတူတူပဲ။ အကယ်၍ အံ့ထူးမော်ရဲ့အဖြေသာ မှန်တယ်ဆိုရင်၊ အံ့ထူးမော်ရဲ့အမှန်တရားဟာ ကျွန်တော် လက်ခံယုံကြည်ခဲ့ဖူးတဲ့အမှန်တရားနဲ့ အတူတူပါပဲ။
“ကဲ… အံ့ထူးမော်။ အတန်းရှေ့ကို ထွက်ခဲ့စမ်း…”
အမြဲတမ်း မျက်နှာထားကို တည်တည်တင်းတင်းနေတတ်တဲ့ ဆရာကြီးဟာ ရုတ်တရက်ပွင့်လန်းလိုက် တဲ့ သူ့မျက်နှာပေါ်က အပြုံးကို သူကိုယ်တိုင် ရုတ်သိမ်းပြီး၊ မတ်တတ်ရပ်နေဆဲဖြစ်တဲ့ အံ့ထူးမော်ကို လေသံမာမာနဲ့ လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ သွားပြီ…။
ဆရာကြီးရဲ့လေယူလေသိမ်းနဲ့ မျက်နှာအနေအထားကိုကြည့်ရတာ အံ့ထူးမော်သကောင့်သားတော့ သွားရှာပြီ။ ဆရာကြီး ပုံစံက စိတ်ဆိုးသွားတဲ့ပုံစံ။ အံ့ထူးမော်ရဲ့အဖြေကတော့ မှားရှာပြီ။
အံ့ထူးမော်။ ကလေးနဲ့ မလိုက်အောင် မာနကြီးလွန်း။ စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်လွန်း။ အကြောတင်းလွန်းတဲ့ကောင်။ ဒီတစ်ခါတော့ သွားရှာပြီ။ ဒီကောင့်ဘက်မှာ အမှန်တရားမရှိတော့ဘူး။ အံ့ထူးမော်တော့ သေပြီဆရာပဲ။
အတန်းရှေ့က ဆရာကြီးရဲ့စားပွဲရှိရာကို ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းကင်းစွာ ဆတ်တောက်ဆတ် တောက်နဲ့ လျှောက်သွားတဲ့ အံ့ထူးမော်ရဲ့ကျောပြင်ကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော် တွေးနေမိတယ်။ ဒီကောင်တော့ ဗျောတင်ခံရပြီပေါ့ဗျာ။ တွေးရင်းနဲ့ စိတ်ထဲက လည်း ဝမ်းသာသလိုလို၊ သနားတာလိုလို မသဲကွဲဘူး။
တစ်တန်းလုံးမှာရှိသမျှ စတုတ္ထတန်းကျောင်းသား/ကျောင်းသူတွေဟာလည်း ဆရာကြီးမေးလို့ မတ်တတ်ထရပ်လိုက်က တည်းက အံ့ထူးမော်ကိုပဲ အထူးအဆန်းသတ္တဝါလို ဝိုင်းကြည့်နေကြတာ။ ကျွန်တော်တို့ကို ကျောပေးပြီး၊ ဆရာကြီးစားပွဲရှေ့မှာ အံ့ထူးမော် မတ်တတ်ရပ်လိုက်တဲ့အထိ အကြည့်ကို သူ့ဆီက မခွာကြသေးဘူး ထင်တာပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဆရာကြီးကို ကြောက်လို့သာ အသံထွက်မဝေဖန်ရဲပေမယ့်၊ အံ့ထူးမော်ကို သနားသူရှိသလို၊ ‘ဒီလောက်ခေါင်းမာတဲ့အကောင် အရိုက် ခံရတာ ကောင်းတယ်’လို့ တွေးတဲ့သူလည်း ရှိနေနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင် ရင်ထဲမှာ သနားတာလိုလို၊ ဝမ်းသာ တာလိုလို ဖြစ်နေသေးတာပဲ။
“ကဲ အံ့ထူးမော်…. မင့်စာအုပ်ထဲမှာ တွက်ထားတဲ့အဖြေကို ဆရာ မကြည့်တော့ဘူး။ ဟောဟိုက သင်ပုန်းပေါ်မှာ မင်း… ဒီအဖြေရအောင် ဘယ်လိုတွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ တွက်ပြစမ်း။”
ဆရာကြီးရဲ့စကား ဆုံးတာနဲ့ အံ့ထူးမော်ဟာ လုံးဝ တွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိပဲ၊ ဆရာကြီးရဲ့ စားပွဲပေါ်က မြေဖြူဗူးထဲက မြေဖြူ တစ်ချောင်းကို ယူလိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့ သင်ပုန်းဆီကို လှမ်းလျှောက်သွားပြီး၊ သူတွက်ထားတဲ့တွက်နည်းအတိုင်း။ သို့မဟုတ် ကျွန်တော်တွက်ခဲ့ဖူးတဲ့တွက်နည်းအတိုင်း ပုစ္ဆာကို စတင်တွက်ပါတော့တယ်။ အံ့ထူးမော်က သင်ပုန်းပေါ်ကို တစ်ကြောင်းချရေးလိုက်၊ ကျွန်တော်တို့အားလုံးက ကိုယ့်စာအုပ်ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်။ သူက ဂဏန်းတစ်လုံးရေးလိုက်၊ ကျွန် တော်တို့က စာအုပ်ထဲက ကိုယ်ရေးထားတဲ့ဂဏန်းတွေကို ငုံ့ကြည့်လိုက်နဲ့ စတုတ္ထတန်းစာသင်ခန်းတစ်ခုလုံးဟာ ကိုယ့်အ လုပ်နဲ့ကိုယ် ရှုပ်ပြီး တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။
အံ့ထူးမော်တစ်ယောက် ဆရာကြီးပေးလိုက်တဲ့အိမ်စာကို တွက်ပြီးသွားပါပြီ။ အံ့ထူးမော်ရဲ့အဖြေဟာ ကျွန်တော်ရခဲ့ဖူးတဲ့ အဖြေနဲ့ အတူတူပါပဲ။ တူဆို အံထူးမော်ရဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနည်းကလည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ ဖြေရှင်းနည်းနဲ့ တူပေတာကိုး…။
အံ့ထူးမော်ဟာ ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်မှာ ပုစ္ဆာကို ချတွက်ပြီးတဲ့အခါ ဆရာကြီးရဲ့စားပွဲဘေးမှာ အတန်းဘက်ကို မျက်နှာမူပြီး လက်ပိုက်ရပ်နေလိုက်ပါတယ်။ ဆရာကြီးဟာ စားပွဲပေါ်က ကြိမ်လုံးတစ်ချောင်းကို ယူပြီး ထိုင်နေရာကနေ လေးလေးကန်ကန် ထလာပါတယ်။ ပြီးတော့ အတန်းသားတွေကို လှမ်းမေးလိုက်ပါ တယ်။
“ကဲ… အခု အံ့ထူးမော်ရဲ့ အဖြေနဲ့ မင်းတို့အဖြေနဲ့ တူကြသလား”
ဆရာကြီးရဲ့ မေးခွန်းကို ဘယ်သူမှ ပြန်မဖြေနိုင်ပါဘူး။ အာလုံးဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လှည့်မေးကြပြောကြရင်းနဲ့ အတန်းတစ်ခုလုံးဟာ ကြွက်စီကြွက်စီ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဆရာကြီးက သင်ပုန်းကို တဗျန်းဗျန်းရိုက်ပြီး အခြေအနေကို ပြန်ထိမ်းလိုက်ပါတယ်။ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူတွေလည်း အားလုံးငြိမ်သက်သွားပါတယ်။
“ကဲ… အံ့ထူးမော်အဖြေနဲ့ တွက်နည်းကို မှားတယ်လို့ ထင်တဲ့လူ လက်ညှိုးထောင်”
ဆရာကြီးရဲ့စကားအဆုံးမှာ တစ်တန်းလုံးရဲ့ လက်ညှိုးတွေဟာ ဖြေးဖြေးမှန်မှန်၊ လေးလေးကန်ကန် လေထဲကို ထောင်တက် လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီထဲမှာ ကျွန်တော် မပါပါဘူး။ ကျွန်တော် အံ့ထူးမော်ကို မှားတယ်လို့ မပြောချင်တော့ဘူး။ အံ့ထူးမော်ရဲ့အဖြေကို တစ်တန်းလုံးက မှားတယ်လို့ တညီတညွှတ်တည်း ထောက်ခံရင် ဆရာကြီးက အံ့ထူးမော်ကိုရိုက်မှာ လား။ ကျွန်တော် မသိပါဘူး။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အမှန်လို့ယုံကြည်ခဲ့ဖူးတဲ့အဖြေကို အံ့ထူးမော်က တွက်ပြထားပြီလေ။ အများရဲ့အားနဲ့ ဆရာကြီး ရိုက်မှာကို ကြောက်ပြီး ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်ကို လွယ်လွယ်လက်လွှတ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်။ အခုလို တစ်တန်းလုံးက အံ့ထူးမော် ဘက်မှာမရှိတဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့အဖြေတူခဲ့ဖူးသူ အံ့ထူးမော်ကို ကျွန်တော် သနားလာတယ်။ အစက ရင်ထဲမှာ အံ့ထူးမော်ကို အမြင်ကတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်လား၊ ကိုယ်အပြစ်မပေးခံရတော့ဘူးလို့ ယုံကြည်မိလို့လား ဝေခွဲမရပဲ ပေါ်လာတဲ့ ဝမ်းသာစိတ် ငွေ့ငွေ့လေးဟာ ပျောက်သွားတယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ရပ်တည်ခဲ့ဖူးတဲ့ အမှန်လား၊ အမှားလား မသေချာသေးတဲ့ ဘက်မှာ အံ့ထူးမော်ကို တစ်ယောက်တည်း ပစ်မထားရက်တော့ဘူး။ ဝမ်းသာမှုကို သနားခြင်းဂရုဏာက အနိုင်ယူသွားတယ် ဆိုပါတော့။
ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော် အံ့ထူးမော်ကို မှားတယ်လို့ လက်ညှိုးထောင်မပြရက်တော့ဘူး…
“တင့်လွင်စိုး… မင်းက ဘာလို့ လက်ညှိုးမထောင်တာလဲ။ မင့်အဖြေက အံ့ထူးမော်နဲ့တူနေလို့လား”
ရှေ့ဆုံးတန်းမှာ လက်ညှိုးမထောင်ပဲ တစ်ယောက်တည်း ထီးထီးကြီးရှိနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဆရာကြီးက မေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း နောင်တတွေ၊ မွန်းကြပ်မှုတွေနဲ့အတူ လက်ပိုက်ကာ ထရပ်လိုက်ပြီး ဆရာကြီးကို ပြန်ဖြေလိုက်မိတယ်။
“ဒီလိုပါဆရာကြီး… ကျွန်တော်လည်း အစက အံ့ထူးမော်တွက်သလိုပဲ နှစ်ဆယ့်လေးနာရီ စံအချိန်နဲ့ တွက်ထားတာပါ။ ဒါပေ မယ့် တစ်တန်းလုံးက ဆယ့်နှစ်နာရီနဲ့ တွက်ထားပြီး၊ နှစ်ဆယ့်လေးနာရီနဲ့ တွက်ထားတာဆိုလို့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဟာ ကိုယ့်အဖြေကိုယ် မှားတယ်လို့ထင်ပြီး ပြန်ပြောင်းတွက်လိုက်မိတာပါ။”
ကျွန်တော့်ရဲ့အဖြေစကားအဆုံးမှာ ဆရာကြီးရဲ့မျက်နှာဟာ ဒေါသကြောင့်တင်းကနဲ ဖြစ်သွားတာကို ကျွန်တော် သတိထားမိ လိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့ ဆရာကြီးက လေသံမာမာနဲ့ အံ့ထူးမော်ကို လှမ်းပြော လိုက်ပါတယ်။
“ကဲ… အံ့ထူးမော် မင်းကြိုက်တဲ့ ကြိမ်လုံးကို တစ်ချောင်းရွေးလိုက်စမ်း”
ဆရာကြီး ပြောလိုက်တဲ့လေသံက မာလွန်းတော့ တစ်တန်းလုံး တုန်သွားသလားတောင် မှတ်ရတယ်။ အံ့ထူးမော်ဟာ ဆရာ ကြီးရဲ့စကားအတိုင်း ကြိမ်လုံးတစ်ချောင်းကို သူ့စိတ်ကြိုက် ရွေးလိုက်တယ်။ လုံးဝ မျက်နှာတစ်ချက်မပျက်ဘူး။ အတန်းသား တွေကတော့ သူတို့ထောင်ထားတဲ့ လက်ညှိုးတွေကို ချလိုက်ကြပြီ။ အားလုံးက အံ့ထူးမော် အဖြေမှားလို့ ဆရာကြီးက ရိုက်တော့မယ်ပဲ ထင်တာပေါ့။ သူ့ကိုရိုက်ရမယ့်တုတ်ကို သူ့စိတ်ကြိုက် ရွေးခိုင်းတယ်ပဲထင်ကြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဒီလိုပဲထင်တယ်။
ကျွန်တော် မတ်တတ်ရပ်နေတာကိုလည်း ဆရာကြီးက ပြန်အထိုင်မခိုင်းသေးဘူး။ ဒါ့အပြင် သူ့လက်ထဲမှာလည်း စားပွဲက ထလာကာစက ကိုင်ထားတဲ့ကြိမ်လုံးတစ်လုံး။ အတန်းရှေ့က ဆရာကြီးရဲ့ဘေးမှာ အံ့ထူးမော်ကလည်း သူ့စိတ်ကြိုက် ကြိမ်လုံးတစ်လုံးကို ကိုင်ပြီးရပ်နေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဆရာကြီးဆီက အားလုံး ဘယ်လိုမှ ထင်မှတ်မထားတဲ့စကားလုံးတွေ ထွက်ကျလာတယ်။
“အကုန်လုံး မှားတယ်…။ တစ်တန်းလုံးရဲ့ အဖြေတွေ အားလုံးမှားတယ်။ ဒီပုစ္ဆာက နှစ်ဆယ့်လေးနာရီနဲ့ တွက်ရမှာ။ ဆယ့် နှစ်နာရီနဲ့ တွက်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ အံ့ထူးမော်တွက်တာ တွက်နည်းရော၊ အဖြေရော မှန်တယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေဟာ ငါ… စာ သင်နေတဲ့အချိန်မှာ သေချာနားမထောင်ဘူး။ ပုစ္ဆာကို နားလည်အောင် မကြိုးစားဘူး။ ဒီတော့ အဖြေမှန်မရဘူး။ ငါ့စကား အတိုင်း မှားတဲ့တစ်တန်းလုံးကို အကုန်တန်းစီရိုက်မယ်။ တင့်လွင်စိုးကိုတော့ ငါကိုယ်တိုင်မရိုက်ဘူး။ ကိုယ်တွက်ထားတာ မှန်ပါရက်နဲ့ မှားတယ်ထင်ပြီး ပြင်ပစ်တဲ့ကောင်။ ကိုယ့်အမှန်တရားကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ယုံကြည်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ဆုပ်ကိုင် မထားနိုင်တဲ့ကောင်။
မင်းတို့မှတ်ထား။ လောကကြီးမှာ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်၊ ကိုယ့်အမှန်တရားကို စွဲစွဲမြဲမြဲ ဆုပ်ကိုင်မထားနိုင်တဲ့သူဟာ ဘယ် တော့မှ အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမာမား မရနိုင်ဘူး။ ဘယ်တော့မှ မြင့်မားတဲ့ဘဝကို မရဘူး။ အဲဒါကို မင်းတို့ မသေမချင်းမှတ်ထား။
ဒီတော့ လွယ်လွယ်နဲ့ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်ကို လွတ်ချတတ်တဲ့ တင့်လွင်စိုးကို သင်ခန်းစာပေးတဲ့ အနေနဲ့ အံ့ထူးမော်က သူ့ကို ကြိမ်လုံးနဲ့ သုံးချက်ရိုက်။ နာအောင်ရိုက်နော်။ အားနဲ့ရိုက်။ သူငယ်ချင်းပဲ၊ အတန်းဖော်ပဲဆိုပြီး လျှော့မရိုက်နဲ့။ နာအောင် မရိုက်ရင် မင်းကို ငါပြန်ရိုက်မှာနော်။
တင့်လွင်စိုးကလည်း ဒီလိုရိုက်လို့ အံ့ထူးမော်ကို လုံးဝ အညှိုးအမှတ်မထားရဘူး။ ဒါ… ငါရိုက်ခိုင်းတာ။ မင်းကိုယ်တိုင်လည်း မမေ့အောင် မှတ်သွား။ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်၊ ကိုယ့်အမှန်တရားကို အသက်ထက်ပိုပြီး တန်ဖိုးထားရမယ် ဆိုတာရယ်။ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်၊ ကိုယ့်အမှန်တရားကို အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် အသက်ထက်ပိုပြီး တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်း ကောင်းတစ်ယောက် ရှိခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာရယ်ကို မြဲမြဲမှတ်သွား။ ကဲ… အားလုံးပဲ အတန်းရှေ့ကို တစ်ယောက်ချင်းတန်းစီ ထွက်ခဲ့ကြ”
ကျွန်တော် အစက ထင်ခဲ့တယ်။ ဆရာကြီးဟာ အတန်းသားလေးငါးခြောက်ဆယ်လောက်ကို ဘယ်လိုမှ တစ်ခါတည်း ရိုက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်မှားသွားတယ်။ ဆရာကြီးဟာ ကျောင်းသားတိုင်း၊ ကျောင်းသူတိုင်းကို အား အညီအမျှသုံးပြီး ရိုက်လည်းရိုက်နိုင်ပါပေ့။ သူ့ရဲ့ ခပ်ဝဝ၊ ခပ်တုတ်တုတ် လက်မောင်းအစုံကို တအားလွှဲလွှဲပြီး လူစေ့တက် စေ့ရိုက်တယ်။ ညာဘက်လက်နဲ့ ရိုက်လို့ညောင်းလာရင် ဘယ်ဘက်လက်က ပြောင်းရိုက်တယ်။ တစ်ခါ ဘယ်ဘက်လက်က ညောင်းလာရင် ညာဘက်လက်နဲ့ ပြောင်းရိုက်တယ်။ တစ်ယောက်ကို သုံးချက်စီ အညီအမျှ။ အားလည်း မပိုသလို၊ အချက်ရေလည်း အတူတူပဲ။
တစ်ချို့ စိတ်ပျာ့တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့၊ မိန်းကလေးတစ်ချို့ဟာ ဆရာကြီးရဲ့ ပထမဦးဆုံးတစ်ချက် မှာတင် ကလေး သဘာဝ ကြူကြူပါအောင် ငိုကြရတယ်။ နာလွန်းလို့ထင်ပါရဲ့။
ဆရာကြီးရိုက်တာကို ခံကြရတဲ့သူတွေက လူကြီးအားနဲ့ လွှဲလွှဲအရိုက်ခံရတာမို့နာတယ်။ အံ့ထူးမော်လို ကလေးချင်းရိုက်တာကို ခံရတဲ့ကျွန်တော်က မနာလောက်ပါဘူးလို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ဆရာကြီးက နာအောင်ရိုက်၊ မနာရင် မင်းကို ငါပြန်ရိုက်မှာ လို့ မှာထားလို့လားမသိဘူး။ အံ့ထူးမော်က ကျွန်တော့်ကို လုံးဝ မညှာဘူး။ သူ့အားရှိသလောက် သူ့လက်ကလေးနဲ့ ကြိမ် လုံးကို တအားလွှဲလွှဲပြီးရိုက်တယ်။ ခုန်ခုန်ပြီးတော့ ရိုက်တယ်။ နာလိုက်တာ မပြောပါနဲ့တော့ဗျာ။ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေ ဆုတ်ပြတ်သတ်သွားသလား မှတ်ရတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ဝမ်းမနဲဘူး။ မငိုလည်းမငိုမိဘူး။ စိတ်ထဲကလည်း ‘ကိုယ်မှန်ရဲ့သားနဲ့ လျှာရှည်ပြီး ပြင်ချင်တဲ့အကောင် ခံဟ။ ခံဟ’လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်နေမိတယ်။ နာလိုက်တာကတော့ မပြောပါနဲ့တော့။ ဒဏ်ရာကြောင့်တော့ မဟုတ် ပါဘူး။
အဲဒီပြဿနာပြီးသွားတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောင်တော်ဦးကျောင်းက စတုတ္ထတန်းလေးမှာ အခြေအနေတွေဟာ အများ ကြီး ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။
အရင်က အံ့ထူးမော်ကို ဆင်းရဲလို့ အထင်သေးကြတယ်ဆိုပေမယ့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူတွေက မေးထူးခေါ်ပြောတော့ ရှိကြသေးတယ်။ အဲဒီအိမ်စာပြဿနာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အတန်းဖော်တွေက အံ့ထူးမော်ကို သိသိသာသာကို ရှောင်ဖယ် လာကြတယ်။ အံထူးမော်ရဲ့ ထောင့်မကျိုးတဲ့ဟန်နဲ့ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုကို ရှိန်သွားကြတာလား။ ဒါမှမဟုတ် အမြင်ကတ်သွားတာလား။ ဒါမှမဟုတ် ဆင်းရဲလို့ အရောမဝင်ချင်ကြတာလားဆိုတာတွေဟာ ဘာမှကို မသဲကွဲ တော့ဘူး။ သေချာတာက အဲဒီပြဿနာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း အတန်းထဲမှာ အံ့ထူးမော်ဟာ သီးသန့်ပိုဆန်လာတယ်။
ဒါတွေကို အံထူးမော်က ဂရုစိုက်လိမ့်မယ်မယ်လို့များ ခင်ဗျား ထင်သလား။ သူကတော့ သူ့စတိုင်အတိုင်း ထီမထင် ကြည်လင်ဆဲပါပဲ။
မနေနိုင်တာက ကျွန်တော်။ အံ့ထူးမော်ဟာ ကျွန်တော့်ကို ရိုက်ခဲ့တဲ့သူ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်သူ့ကို မနာရက်ဘူး။ သူ့ကို ကျွန်တော် လေးစားသွားမိတယ်။ ကလေးချင်း လေးစားဖို့ဆိုတာ အတော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စ။ အဲဒီအချိန်က အံ့ထူးမော်အပေါ် ထားတဲ့ ကျွန်တော့်သဘောထားကို ကျွန်တော် ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ၊ အံ့ထူးမော်ကို ကျွန်တော်ဟာ ခင်မင်ရုံသက်သက် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် သိလာတယ်။ သေချာပါတယ်။ ဆော့မယ်၊ စားမယ်၊ အိပ်မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးကလွဲရင် ဘဝအတွက် ဘာမှ လေးလေးနက်နက် မတွေးတတ်သေးတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ကလေးစိတ် နုနုလေးထဲမှာ အံ့ထူးမော်ကို အသေအချာကို လေးစားခဲ့တာပါ။
အံ့ထူးမော်ကို တစ်ခြားကျောင်းသား/ကျောင်းသူတွေက အရောမဝင်ကြသလောက် ကျွန်တော်က သူ့ကို အဖက်လုပ်ဖို့ ကြိုး စားမိတယ်။ ဒါပေမယ့် မရဘူးဗျ။ ဘာလို့ဆို အံ့ထူးမော်ဟာ ကျွန်တော့်ကို လုံးဝမခေါ်တော့ဘူး။ ကျွန်တော့်ခင်မင်မှုကို အံ့ထူးမော်က လုံးဝအသိအမှတ်မပြုတော့ဘူး။ သူ့အပေါ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ လေးစားမှုကို အံ့ထူးမော်က လုံးဝ လက်သင့် မခံတော့ဘူး။
ကျွန်တော်က သူ့ကို အရောဝင်ဖို့လုပ်တိုင်း၊ လမ်းမှာတွေ့လို့ စနှုတ်ဆက်တိုင်း အံ့ထူးမော်ဟာ ကျွန်တော့်ကို တမင်တင်း ထားတဲ့ ဆက်ဆံရေးနဲ့ မထီမဲ့မြင်ပြုတတ်တယ်။ ကျွန်တော့်ကို တွေ့တဲ့အခါတိုင်း ပြုလုပ်တတ်တဲ့ သူ့ရဲ့ ထီမထင်ဟန်က ကျွန်တော့်စိတ်ကို ခြောက်လှန့်နေတာလည်း အမှန်ပါပဲ။ မျက်နှာကို ခပ်မော့မော့ထား၊ သူ့ရဲ့မျက်လုံးအစုံကို မှေးစင်း၊ မျက်ခုံးနှစ်ဖက်ကို ယောင်ယောင်လေးကွေးပြီး နုတ်ခန်းထောင့် စွန်းလေးကွေးတယ်ဆိုရုံ သူ့ရဲ့ပြုံးမဲ့မဲ့စတိုင်ဟာ ကျွန်တော့်ကို လှောင်ပြောင်နေသလိုပါပဲ။ လအနဲငယ်သာ ကျန်ရှိတော့တဲ့ ဖောင်တော်ဦးကျောင်းရဲ့ လေးတန်းကျောင်းသားဘဝ ကျွန်တော့်ရဲ့ လက်ကျန်စာသင်ရက် တွေကို ပိုပြီးတော့ ပင်ပန်းစေတယ်။
နောက်တော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အံ့ထူးမော်ကို အများနည်းတူ ရှောင်ဖယ်လိုက်တော့တယ်။ သူများတွေက ဘယ် လိုသဘောနဲ့ အံ့ထူးမော်ကို အဖက်မလုပ်ကြမှန်း မသိပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ကို ကြောက်သွားမိတာ အမှန်ပါပဲ။ ဘာပဲပြောပြော ကျွန်တော်ကပါ အံ့ထူးမော်ကို ကျဉ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီဆိုမှတော့…. ဖောင်တော်ဦးကျောင်းရဲ့ စတုတ္ထ တန်းအခန်းမှာ အံ့ထူးမော်ဟာ လုံးဝသီးသန့်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ ကလေးနဲ့မလိုက်အောင် ပိုပြီး အထီးကျန်ဆန်သွား ပါတော့တယ်။ ဒါကို…
အံ့ထူးမော်က ဂရုစိုက်လိမ့်မယ်လို့ ခင်ဗျားထင်သလား….?
လုံး… ဝ… ပါပဲ…
“မင်းတို့မှတ်ထား။ လောကကြီးမှာ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်၊ ကိုယ့်အမှန်တရားကို စွဲစွဲမြဲမြဲ ဆုပ်ကိုင်မထားနိုင် တဲ့သူဟာ ဘယ်တော့မှ အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမာမား မရနိုင်ဘူး။ ဘယ်တော့မှ မြင့်မားတဲ့ဘဝကို မရဘူး။ အဲဒါကို မင်းတို့ မသေမချင်းမှတ်ထား။”
အထက်ပါစကားဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိမ်စာပြဿနာမှာ အနှစ်ချုပ်ပြီး ဆရာကြီးဦးစော ဆုံးမခဲ့တဲ့စကားပါ။ ဒီစကားကရော အမှန်တရားဟုတ်ကဲ့လားလို့ ကျွန်တော် အခုချိန်မှာ စဉ်းစားနေမိတယ်။
ဆရာကြီးရဲ့ဆုံးမစကားကို အကောင်းဆုံး သက်သေပြနိုင်တာကတော့ အခုချိန်မှာ အံ့ထူးမော် ဘယ်ဘဝရောက်နေလဲ၊ ဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတဲ့ အဖြေပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော် ရှာတယ်။ လေးတန်းပြီးတဲ့နောက် ကျွန်တော်နဲ့ လူချင်းကွဲသွားတဲ့ အံ့ထူးမော်ကို ကျွန်တော်ရှာတယ်။
ဘာလို့ဆို အခုအချိန် ဟောဒီမြန်မာပြည်ကြီး ဒါမှမဟုတ် ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံးလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ အများလက်ခံနိုင်တဲ့ ဘုံဝါဒအမှန်တရားဆိုတာ အတော့်ကို ရှားသွားပြီ။ အင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့ ဓမ္မကိုတောင် တညီတညွတ်တည်း တစ်ပြိုင်ထဲ လက်ခံတဲ့အမှန်တရားလို့ တစ်ချို့က လက်မခံချင်တော့ဘူး။
ကိုယ့်အတ္တနဲ့ကိုယ်၊ ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ကိုယ်၊ ကိုယ့်အစုအဖွဲ့နဲ့ကိုယ်။ ခင်ရာဆွေမျိုးအမှန်တရား၊ မြိန်ရာဟင်းကောင်း အမှန်တရား၊ လက်သင့်ရာစားတော်ခေါ်တဲ့အမှန်တရားတွေသာ ကြီးစိုးနေပြီလေ။
ဒီတော့ ခုချိန်မှာ အံ့ထူးမော် ဘာဖြစ်နေလဲ ကျွန်တော် သိပ်သိချင်တယ်။ သူ… ဘယ်လိုရပ်တည်နေလဲ ကျွန်တော် မြင်တွေ့ ချင်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်ခက်တာက နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ကျော်တောင် ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့ အဖြစ်အပျက်တွေကိုသာ မှတ်မိပြီး၊ အံ့ထူးမော်ရဲ့ ငယ်ရုပ်ကိုတောင် ကျွန်တော့်မှာ မနဲပုံဖော်နေရတယ်။
တစ်ခါတစ်ခါ လမ်းပေါ်မှာ အရမ်းချမ်းသာတဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တူ သူဌေးကြီးတစ်ယောက်ကို တွေ့ရင် အံ့ထူးမော်များ ဖြစ်နေမလားလို့ ကျွန်တော့်မှာ လိုက်ကြည့်ရတာအမော။ ရုံးဋ္ဌာနတွေကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ရောက်တဲ့အခါ ကျွန်တော်နဲ့ အသက် အတူတူလောက် ရာထူးကြီးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကို တွေ့ရရင်လည်း ‘ခင်ဗျားဟာ အံ့ထူးမော်လား’ဗျာလို့ မေးချင်စိတ်က တစ်ဖွားဖွား။ ရုပ်သံမီဒီယာတွေကလွှင့်တဲ့ လွှတ်တော်ချန်နယ်မှာ ပြည်သူကရွေးကောက်တင်မြှောက်တယ်ဆိုတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်ကြီးဆေတွကို တွေ့ရင်လည်း ‘အံ့ထူးမော်များလား…’လို့ ထင်ယောင်မိရတာက ခဏခဏ…။ အနုပညာ၊ အားကစား၊ ပညာရေး၊ နိုင်ငံရေး အစရှိသဖြင့် နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ အောင်မြင်နေတဲ့ လူတွေကို တွေ့ရင် သူတို့ကို အံ့ထူးမော်များလားလို့ ကျွန်တော်တွေးနေမိတယ်။
မြန်မာပြည်အနှံ့ လှည့်လည်သွားလာနေရတဲ့ ဇာတ်သမားဘဝတုန်းကလည်း ကျွန်တော် အံ့ထူးမော်ဆိုတဲ့ကောင်ကို ရှာခဲ့ တယ်။ ဒါပေမယ့် အချီးအနှီးပါပဲ။ ကျွန်တော့်အသက် လေးဆယ်သာ ကျော်ခဲ့တယ်။ အခုချိန်ထိ ကျွန်တော် အံ့ထူးမော်ကို မတွေ့သေးပါဘူး။
အရိုးသားဆုံးဝန်ခံရရင် ကျွန်တော် မသိဘူး။ အခုလို အသက်လေးဆယ်အရွယ် လူလတ်ပိုင်းတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အထိ အမှန်တရားအစစ်ကို ကျွန်တော် မတွေ့ဖူးသေးဘူး။
ခင်ဗျားတို့ဟာ အမှန်တရားဘာလဲဆိုတာ သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ အံ့ထူးမော် ကိုသာ တွေ့အောင်ရှာကြပါ။ အဲဒီကောင်က အမှန်တရားကို သိပ်သိတဲ့အကောင်။ သိပ်တန်ဖိုးထားတဲ့အကောင်။ သိပ် ယုံကြည်တဲ့အကောင်။ စိတ်ဓာတ်လည်း အင်မတန် ခိုင်မာတဲ့အကောင်။ အင်မတန် ကြံ့ခိုင်တဲ့အကောင်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ ဒါမှမဟုတ် လောကကြီးမှာ သူ့လိုအမှန်တရားကို တိတိကျကျ သရုပ်ခွဲတတ်တဲ့သူတွေ အများကြီးလိုအပ်တယ်။ သူ့လို ကလေးအရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် အမှန်တရားကို စွဲစွဲမြဲမြဲ ဆုပ်ကိုင်ထားတတ်တဲ့လူတွေ အများကြီးလိုအပ်တယ်။ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်အတွက် အသက်ကိုပင် ပေးဝံ့တဲ့သူတွေ အများကြီးလိုအပ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ထပ်ပြောပါရစေ…။
ကျွန်တော့်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခင်ဗျားအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တိုင်းပြည်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကမ္ဘာကြီးအတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် …
တကယ်တော့… အဲဒီကောင်ဟာ အမှန်တရားပါပဲ…
ဒီစာဖတ်နေတဲ့ ခင်ဗျားဟာ အံ့ထူးမော်လားဗျာ…
ဇော်သစ် ● နင်လားဟဲ့အမှန်တရား (0)
ဇော်သစ် – ဟန်ဘာကာ စားသူများ (၀တ္ထုတို) (0)
ဇော်သစ် – လူနဲ့တူသော ကြောင် (၀တ္ထုတို) (0)
ဇော်သစ် – မိအေးရေးတဲ့ ဒိုင်ရာယီ (၀တ္ထုတို) (0)
ဇော်သစ် – မိတ် အင် ပစ္စာန္တရာဇ် (0)